အမှန်ကိုသာမြင်ကြပါမျက်ကန်းမျိုးချစ် မဖြစ်ကြပါစေနှင့် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကာလမသုတ်၏ အနှစ်ချုပ်
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဝေဖန်ပုတ်ခတ်စော်ကားသူတွေကို အရေးယူသလို အခြား ဘာသာတွေကို အမုန်း တရားနဲ့ စော်ကားပုတ်ခတ်နေသူတွေကိုလည်း အရေးယူဖို့ သန့်ရှင်းသော အစိုးရကြီးကို လက်တို့ချင်ပါရဲ »
နောက်ပြီးတော့ ဦးခင်ညွန့် ဒီလောက် ဆိုးခဲ့တဲ့ လူဟာ ပြန်လည် ထင်ပေါ် လာတယ်။မြန်မာပြည် ဒီလောက် ဆိုးရွား သွားခဲ့တဲ့ အဓိက တရားခံ ထဲမှာ သူပါတယ်။ ၈၈ မှာ သပိတ် နှိမ်နှင်းရေး တွေကို လူ မဆန်အောင် ကြူပင်ခုတ် ကြူငုတ် မကျန် လုပ်ခဲ့တာ သူပါပဲ။ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်ထုတ်ပြီး သူတို့ဖက်မှ သူလျှိုတွေထည့်သွင်းပြီး ယုတ်မာမှူတွေ စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူလူထုမှ ဆန္ဒပြသူများအား ထမင်းထုပ်ဝေခြင်း သောက်ရေတိုက်ခြင်းဖြင့်အားပေးနေကြသည် များကို မ.ဆ.လအချောင်သမားတောကြောင်များမှနေပြီးသောက်ရေ အတွင်းအဆိပ်ခပ်မှု များကိုကျူးလွန်လာကြပါတယ်။ အဆိပ်ခပ်သူအား ဖမ်းမိလျှင် သူတို့ဘက်မှစောင့်ကြည့်နေသူများမှ ဓားဖြင့် ဝင်ထိုးပြီး နှုတ်ပိတ်သတ်ဖြတ် ခြင်းများပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြ သဘိတ်မှောက် သူများ ကြားထဲတွင် မ ဆ လ ပါတီမှ အမာခံများ ဝင်ရောပြီး အနှောက်အရှက်အဖျက်အဆီးများပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ အစိုးရပိုင် ဂိုဒေါင်များ ကို ဖေါက်ထွင်းပြီး သူတို့ဖက်မှ စတင်သယ်ယူ ပါတော့တယ် ရပ်ကွက်မှ လူအချို့က ဝင်ရောက်သယ်ယူကြပါတယ်။ထိုသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြခြင်းကို နိုင်ငံတော်မတည်ငြိမ် အောင် နည်းမျိုးစုံ ဖြင့် ဖန်တီးလျှက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဆူပူမှု၊ လုယက်မှု၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်မှုတွေနဲ့ … စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပါတော့တယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို တာဝန်ယူ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်သူတွေကတော့ … ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ဦးနေဝင်းသမီး .. ဒေါ်စန္ဒာဝင်းတို့ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကြတယ်လို့ ဖေါ်ထုတ် ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on December 25, 2014 at 12:05 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “အမှန်ကိုသာမြင်ကြပါမျက်ကန်းမျိုးချစ် မဖြစ်ကြပါစေနှင့်”
December 25, 2014 at 1:16 pm | Reply
December 23 at 9:58pm ·
္ဘ နိုင်ငံရဲ့အစွယ်ကိုလိုချင်သူက ဝမ်ပေါင်တရုတ်…
္ဘ အသွား စေခိုင်းသူက စစ်ခရိုနီ…
္ဘ သေနတ်နဲ့ ပစ်သူက ရဲတပ်ဖွဲ့…
္ဘ ဘူဒိုဇာနဲ့အထိုးခံလိုက်ရတာက လယ်တီသိမ်…
္ဘ ပွဲချင်းပြီးသေသွားတာက ဒေါ်ခင်ဝင်း…
္ဘ မျက်မမြင် နားလေး (အ)သွားတာက မဘသ…
္ဘ အဖမ်းခံလိုက်ရတာက လက်ပံတောင်းသား…
္ဘ ဝိုင်းအဆဲခံရတော့ NLD နဲ့ မွတ်ကုလား…
Sai Hon Pa ရဲ့ Comment
သက်နှင်း သုန္ဒရီ -စာမျက်နှာမှ